မနေ့က အိမ်ရှင်းရင်းနဲ့ ဆေးတွေထည့်ထားတဲ့ ဘီဒိုကို ရှင်းဖြစ်တယ်။ စင်ကာပူကိုရောက်တဲ့ ၄နှစ်ခွဲအတွင်းမှာ တခါမှ အိမ်မပြောင်းဖူးတော့ အခုပြောင်းမယ်လည်းဆိုရော ပစ္စည်းတွေက သိမ်းလို့ကို မကုန်နိုင်ဘူး။ ချောင်ကြိုချောင်ကြားက ထွက်ထွက်လာတဲ့ ပစ္စည်းမွစိမွစိတွေလည်း မနည်း။
ဆေးဘီဒိုဖွင့်ပြီး ရှိသမျှဆေးတွေ ဆွဲထုတ်လာပြီး Expiry Date ဖြစ်တာတွေ လွှတ်ပစ်မယ်။ မဖြစ်သေးတာတွေကို သေတ္တာထဲ ထည့်သိမ်းမယ်ဆိုပြီး ရှင်းလိုက်တာ အားလာလာ အပေါ်က ဓာတ်ပုံထဲက ဆေးတွေအကုန်လုံးက Expiry Date ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့။ မနည်းဘူး ။ ဒါတောင် မနှစ်က တစ်ခါရှင်းပြီး လွှတ်ပစ်သေးတယ်။ ကောင်းတဲ့ဆေးတွေကတော့ ဖိနပ်ဘူး ၁ဘူးခွဲစာလောက် ကျန်သေးတယ်။
ဘာတွေတုန်းတစ်ယောက် ဘာကိစ္စနဲ့ ဆေးတွေဒီလောက်များနေရသလဲ။ ရောဂါထူလို့လားလို့ မေးရင် မဟုတ်ပါဘူးလို့ ဖြေပါရစေ။ :D
အဲ့ဒီဆေးတွေ အကုန်လုံးက ရန်ကုန်က မားသား လူကြုံရှိတိုင်းထည့်ပေးလိုက်တာပါ။ မာသားရဲ့ စေတနာမေတ္တာတွေပါ။ သူမ မရှိတဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ ကျွန်မနေမကောင်းဖြစ်ရင် မလုပ်တတ်မကိုင်တတ်ဖြစ်မှာစိုးလို့ စာတွေနဲ့ ဆေးညွှန်းတွေ သေချာရေးပြီးထည့်ပေးလိုက်တာပါ။ ကျွန်မက တော်ရုံတန်ရုံနဲ့ မဖျားတတ်သလို ဆေးခန်းလည်း မသွားဘူး။ အိမ်မှာရှိတဲ့ဆေးသောက်ပြီး ဒီတိုင်းနေလိုက်တာများတယ်။ အခုမှသာ ကြီးကျယ်နေတာ။ ချောင်းဆိုးရင် ဆေးခန်းသွားရတာနဲ့။ နှာစေးရင် ဆေးခန်းသွားရတာနဲ့။ (အမှန်တော့ ကျောင်းလခထဲမှာ ဆေးဖိုးပါပြီးသားမို့လို့ ကျောင်းက ဆေးခန်းကို တန်အောင်သွားတာပါ ... အဟီး)
မာသားကတော့ ညဖက်တွေ ဘာတွေ အရေးကြီးလို့ ဆေးသောက်စရာမရှိ ဖြစ်မှာစိုးလို့ ခုချိန်ထိ ထည့်ပေးတုန်းပါပဲ။ အရမ်း ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အစာအိမ်ဆေးက လွဲရင် ဘာဆေးမှ သိပ်မသောက်ဖြစ်တော့ ဆေးတွေက အလဟဿဖြစ်ကုန်တာတော့ နှမြောစရာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါလည်းမိဘမေတ္တာပဲလေ.. မထည့်ပေးနဲ့ ပြောရင်လည်း မာသားက စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာစိုးလို့ လျှော့ပဲ ထည့်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။
ကဲ... ဆေးတွေ ဘာတွေ တစ်ခုခုလိုရင် ဘာတွေတုန်းကို ပြောပါ။ ဒေါက်တာ ရမ်းကု လုပ်ပါမယ် :)
Posted by ဘာတွေတုန်း at 11:13 PM
Mr Triple P said...
ပုံမှန် အိမ်မရှင်းမှန်းသိသာပါတယ်... ဟီး...
အတူတူပဲ ဆေးတွေ အံဆွဲထဲမှာ ပြည့်တော့မယ်။
နေမကောင်းရင် ငြိမ်နေမှပဲ ဆေးအတင်းလာတိုက်နေဦးမယ်း)))
I can imagineabigger pile of other junks in your room!
The room that was not cleaned for four years? =P
အလုပ်လုပ်ရင် အိမ်မှာဆေးရှိတောင် ဆေးခန်းက သွားဖြစ်တယ်။ အဲဒါမှ M.C ရမှာကိုး။
မရောက်တာ ကြာလို့ လာလည်တယ်